Ekike & Mee Ekike Dị Elu Ejiri Omenala Mere Ọma | Popular Jewelry
Na-atụgharị Echiche n'ime Eziokwu Kemgbe 1988
N'ihe karịrị afọ iri abụọ na iteghete nke ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ anyị arụpụtala ọmarịcha ọla dị mma maka ndị ahịa anyị. Na Popular Jewelry, anyị na-anya isi na atụmatụ anyị ma kwenyere na ụzọ agbakwunyere mpempe nke ọ bụla dịkwa mkpa dị ka ọla ahụ n'onwe ya. Site na oge anyị tụbara nchara a wụrụ awụ, rue oge ka anyị na-etinye ọsịsọ ahụ na - egbu egbu na mpempe - ọ bụghị nke abụọ nke ọrụ nka na-efu. Ndị otu ndị ọkachamara anyị ga - eso gị rụọ ọrụ nke ọma iji chepụta ọla ị chọrọ. Site na mpempe aha, site na eriri ukwu, ruo na ọnụ nke ọla edo na diamond - anyị ga-agbanwe echiche gị ka ọ bụrụ ọla dị oke ọnụ ahịa - chee na ọ bụ ihe anyị onwe anyị metụtara King Midas.
Chepụta ma mepụta ọla nke aka gị
Na mkpokọta, anyị na-akwado gị ka ị chebara ajụjụ ndị a dị mkpa:
1. typedị ọla dị a areaa dị mkpa ka ị nwere mmasị na i mepụtara?
Ihe atụ: (Platinum, Gold [24K, 22K, 18K, 14K, 10K], Silver)
2. Kedu agba?
Ihe atụ: (edo edo edo, edo edo edo, ọla edo ọcha, oji wdg)
(Akụkụ niile / akụkụ ụfọdụ)
3. ofdị udidi (s) ma ọ bụ polish / finish (bụ) ị ga-achọ na mpempe gị:
Ọmụmaatụ: Finish Polish, Satin Finish, Brushed Finish, Hammered Finish, Wire Brushed, Sandblasted Finish, wdg.
4. Akụkụ (nwere ike ịbụ ihe ruru) nke ibe
Ọmụmaatụ: (Ogologo x x obosara x Omimi) milimita ma ọ bụ sentimita
Ee / Ee e
Ọ bụrụ Ee:
• typedị gemstone dị a ?aa?
• Olee otu ọ bụla bara nnukwu uru?
• Ebee ka ị ga-achọ ka ha debe ya?
• styledị akwụkwọ ozi dị a ?aa?
Ọmụmaatụ: Akwụkwọ Ozi Gbochie / Ihe edemede
• Gịnị ka o kwesịrị ikwu?
Ma atụ: Dbọchị, akara aha, aha, amaokwu, wdg. (Biko mara ebe ị ga-ekwe ka ogo ọla ị na-akwụ ugbu a)
Ihe eji eme isi dika udiri emebere aru (ihe oma ka ichota mmadu nwere ezé ndi ozo.) Find choo imata ihe banyere icho edo edo edo (emee ihe). peeji nke raara onwe anyị nye.
Bido njem ahụ
Iji nyere anyị aka ị na-enyere gị aka, anyị na-akwado ike ịbịa n ’ọnọdụ anyị na Chinatown NYC. Weta echiche gị (s) na ụdị ọ bụla, ụdị eserese ma ọ bụ sketị ndị dị otú a. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịkpọ (212) 941-7942 ma ọ bụ zitere anyị ozi na info@popular.jewelry nyefee ajuju ma obu juo a ruturu. Anyị na-atụ anya ịmepụta gị ihe pụrụ iche.